China ogbe System factory na-emepụta | Zhenyuan
Kpọọ Nkwado 86 + 18008724076
Email Nkwado imepụta2020@vip.163.com
Ọrụ .rụ Ọrụ
Nrụpụta Industriallọ Ọrụ
-Lọ Ndị Elu Elu
Industrial osisi osisi Atiya
Klaasị usoro nhazi
Okpokoro Net, Klaasị Structure Heterosexual
Iwu mmiri na ọkụ eletrik atụmatụ
Ngwunye grid bụ oghere nke oghere mejupụtara ọtụtụ ndị grid jikọtara site na ọnụ bọọlụ na ụdị grid ụfọdụ. China malitere iwebata ígwè grid Ọdịdị technology na ngwaahịa si mba ọzọ na 1978, nke nwere uru nke nnukwu esịtidem ohere, ìhè arọ, ezi seismic arụmọrụ
Ngwunye ihe eji emepụta ihe eji eme ihe bu ihe omuma nke mebere site na ijikota otutu ndi ozo site na nkwonkwo uzo dika uzo ozo. China malitere ibubata ígwè grid Ọdịdị technology na ngwaahịa si mba ọzọ na 1978. The ígwè okporo Ọdịdị nwere uru nke nnukwu esịtidem ohere, ìhè arọ, ezi seismic arụmọrụ na elu nchekwa.
Grid Ọdịdị bụ ụdị spatial mmanya usoro Ọdịdị, na mesiri ndị òtù jikọọ site na nkwonkwo dị ka ụfọdụ iwu. A na-ahazi nkwonkwo ahụ dị kaihe nkwonkwo, ndị otu na-tumadi doro ike axial, na otu akụkụ akụkụ nke ndị otu pere mpe. Ndị otu a na-ezukọ na mbara igwe na-akwado ibe ha, na-ejikọkọta ndị otu ahụ nwere nrụgidena-akwado usoro, ya mere, ihe eji eme ihe bụ akụ na ụba. N'ihi usoro nhazi oge niile, ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị otu na ọnụ nwere otu ụdị na ogo ahụ, nke dị mma maka imepụta ụlọ ọrụ na ntinye saịtị.
Grid owuwu na-adịkarị elu-iji statically anwụghị anwụ akụkụ, nke nwere ike iguzogide lekwasị anya, ibu ike na ebumnuche nke ọma ma nwee arụmọrụ dị egwu. Ngwurugwu grid nwere ike imeghari na ihe ndi choro nke ulo ndi mmadu na osisi di iche iche di iche iche na onodu nkwado di iche iche, tinyere ugbo elu ulo di iche iche na nchikota ha. Na Mee 1981, China kwupụtara yaIwu banyere Nhazi na Ewu nke Grid Structures (JGJ7-80). Na Septemba 1991, China degharịrị ya ma kwupụta yaIwu banyere Nhazi na Ewu nke Grid Structures (JGJ7-91). Na July 2010, China kwupụtara yaIwu Nka na ụzụ maka oghere dị na mbara igwe (JGJ7-2010) site na ijikọta ihe ndị dị mkpa nke akụkụ okporo ụzọ, shells dị nkọ na stereo anwụrụ truss owuwu. Na mgbakwunye, makabọl nkwonkwo na ha oyiyi akwa nke okporo Ọdịdị, China ka pụrụ nnọọ kwupụtara Mkpo nke Ikuku Ọdịdị Grid (JG / T10-2009) na Mgbapu Ike Dị Ike Maka Nkwonkwo nke Glọ Ọrụ Grid (GB / T16939-2016), Maka nkwonkwo nkwonkwo welded nke grid na ngwa ha, China kwupụtara Welded oghere oghere nke oghere nke oghere grid (JG / T11-2009). Provinfọdụ ógbè enyela ụkpụrụ mpaghara maka imepụta njikọta, dịka ọkọlọtọ mpaghara mpaghara JiangsuNkọwapụta teknụzụ maka isi ndị isi nke njikọ njikọta nke grid (Shell) (DB32 / 952-2006). Standardskpụrụ ndị a metụtara bụ nchịkọta nke ihe ndị a rụzuru ugbu a nke usoro nhazi usoro na nyocha sayensị na mba anyị, ma na-akwalite mmepe nke usoro ntanetị na mba anyị.
Companylọ ọrụ ahụ nwere 25,000m2 nke okporo, anwụrụ truss, na-ekpo ọkụ ekwe na oyi na-atụ ekwe mmepụta noo. Companylọ ọrụ ahụ nwere usoro mmepụta atọ. The nnukwu grid mmepụta akara tumadi metụtara bolt grid, welded bọl grid, anwụrụ truss na ndị ọzọ na ulo oru, ifiọkde a zuru okè nzukọ akara si plasma blanking, nzukọ, ịgbado ọkụ, ogbugba ọgbụgba ọkụ, akpaka sere, eke gas ihicha, nkwakọ na loading. Ọ nwere ike inye ndị ahịa otu ọrụ nkwụsị.
Structural technology na ngwaahịa: Site ogologo oge omume, dị ka a tozuru okè ụlọ Ọdịdị ụdị, ígwè okporo Ọdịdị e ọtụtụ-eji dị iche iche na ulo oru ọha ụlọ ọrụ ndị dị otú ahụ dị ka nnukwu-adịru ulo oru osisi, n'ụlọ nkwakọba, nnukwu coal na-amụkwasị, ọdụ ụlọ, ụlọ ahịa malls , halllọ ngosi ihe ngosi, ebe a na-eme egwuregwu, ebe a na-eme ihe ngosi na ọdụ ụgbọ oloko dị elu.
Factory ele mmadụ anya n'ihu mmepụta dịruru ná njọ
Mmepụta Usoro 1
Mmepụta Usoro 3
Mmepụta Usoro 2
Mmepụta Usoro 4
Akụkụ nke ngosipụta ngwa ọrụ ụlọ ọrụ
Ngosipụta nke ngwaahịa nke ụlọ ọrụ
Company ngwaahịa akụkụ ikpe iwebata
Alọ Akwụkwọ udlọ Akwụkwọ
Ihe oru ngo a di na Zhejiang, China
Rallọ nkwakọba ihe na-emepụta ihe
Ihe oru ngo a di na Shaanxi, China
Ihe oru ngo a di na shanxi, China
Colọ oriri na ọụcoụ ebe obibi
Ihe oru ngo a di na Guangzhou, China
Nke gara aga: Mmepụta ụlọ ọrụ na ntinye okwu
Osote: Ngalaba Production Nkebi nke orylọ Ọrụ
Modular Pipe okike
Ngwunye Pipe Na Staad Pro
Nrụpụta Pipe ígwè
Ihe owuwu ihe eji eme ihe
China Zhenyuan Steel Structure Engineering CO., LTD bụ ọkachamara ígwè Ọdịdị ngo tụnyere ihe imewe, rụpụta na echichi.
Adreesị: Tianjin na Yunnan, China
Ekwentị: 86 + 18008724076
WeChat: Ikwer 53329
Kpọtụrụ: Maazị Lin
Oge azụmahịa (oge Beijing): 8:30 ~ 18:30